Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana fanaovana peta-kofehy - Fitaovana fanaovana amboradara China
100 loko DIY kofehy landihazo kofehy amboradara kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny loko DIY. Ny kofehy peta-kofehy ambony kalitao miloko marevaka, stereoscopic, tanjaka avo, fanoherana, aza miala, aza vaky mora frizzy. Ny kalitao avo lenta sy maharitra, ny kofehy fanaovana amboradara dia vita amin'ny polyester malefaka, malefaka ary landy. Mora ampiasaina, ny felany tsirairay dia 8m ny halavany ary ny felam-boninkazo amboradara tsirairay dia tonga amin'ny tadiny enina. Ny felam-boninkazo lakroa dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana fehin-tànana fisakaizana, Stitch Cross, peta-kofehy, asa tanana ho an'ny ankizy, zaitra, fanenomana, DIY, Crochet sns. Mety ho an'ny ankizy, namana, reny, renibe, mpiara-miasa, mpifanila vodirindrina na fanombohana stitch.